Lycée « Notre Dame » Mahajanga : Tafapetraka ny tranomboky nomerika -
AccueilSongandinaLycée « Notre Dame » Mahajanga : Tafapetraka ny tranomboky nomerika
Lycée « Notre Dame » Mahajanga : Tafapetraka ny tranomboky nomerika
08/05/2018 admintriatra Songandina 0
Napetraka tao amin’ny Lycée « Notre Dame » ao Mahajanga ny bibliothèque nomerika, izay tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena. Ahitana fitaovana moderina ity toerana ity, ka efa misy ordinatera misy internet sy imprimante. “ Hitondra voka-tsoa amin’ny fanatsarana ny voka-panadinan’ny mpianatra ny fananana io bibliothèque nomerika io. Ny application sy ny logiciel napetraka tao anatin’ireo ordinatera ireo dia natao indrindra hanatsarana ny fikarohana hataon’ny mpianatra”, hoy ny minisitry ny Paositra Neypatraiky Rakotomamonjy.
Izy rahateo efa mpianatra tao amin’ity sekoly ity.
Tsy hijanona eo kosa ny asa fanapariahana ity tetikasa ity fa hitohy any amin’ny faritra maro. Ny Lycée Philbert Tsiranana sy ny Lycée Technique Mahajanga koa dia nahazo fitaovana informatika , tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena. Nandritra ity fotoana tany Mahajanga ity koa dia nisy ny fanofanana nozarain’ny MPTDN ho an’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra mikasika ny fikirakirana ny tambazotra sosialy.